Filtrer les éléments par date : mercredi, 13 février 2019
mercredi, 13 février 2019 17:36
Mbola Rajaonah arrêté à Antsahabe
mercredi, 13 février 2019 14:11
Ambatoboeny: Miakatra fitsarana anio ireo mpanao kidnapping an'i Housna
Hiatrika fitsarana anio ireo tratra tamin'ny fakana an-keriny ilay mpandraharaha vavy Housna taty Ambatoboeny ity.
Ny alakamisy 31 janoary moa no nanafika ity tokantrano ity ireo dahalo miisa 40 tokony tamin'ny 11 ora alina. Nokapaindreo ny famaky ny lohan'ilay raim-pianakaviana, ary nentindreo i Housna Ramjanaly monina ao Ankijabe, Distrika Ambatoboeny.
mercredi, 13 février 2019 09:08
CHU PZAGA Androva-Mahajanga: Nohavaozina ny tobi-pitsaboana ho an’ireo tra-pahasembanana
Nambaran’ny Talen’ny CHU PZAGA Androva Mahajanga, Profesora Tiandaza Dinaraly Odilon fa ny fitsaboana atao ao amin’ny “Service d’Appareillage et de Rééducation”(SAR), izay natao indrindra hitsaboana ireo tra-pahasembanana ara-batana, dia efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ara-kalitao.
Maimaimpoana, hoy izy, ny fikarakarana ny zaza voan’ny mivadi-tanana sy mivadi-tongotra, ary raisin’izy ireo an-tanana ny fanabeazana ireny olona manana tsy fahatomombanana ara-batana ireny, mba hananan’izy ireo fizakan-tena.
mercredi, 13 février 2019 09:07
Andravitokana Amboangibe: Tafakatra 23 ireo zaza matin'ny kitrotro
Mikiakiaka ireo mponina lavitra andriana izay any ambanivohitra, toy ny ao amin'ny Kaominina Amboangibe, Distrika Sambava, noho ny firongatry ny aretina kitrotro, fa maro ireo zaza latsaky ny sivy taona maty noho izany valanaretina izany.
Nanao be midina tany an-toerana ny ekipan'ny fahasalamam-bahoaka rehefa nahazo baiko sy toromarika avy amin'ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka mba hijery haingana ary handray an-tanana ireo zaza manodidina ny 3300 izay tandindonin-doza.